तपाईको (बिहिबार २०७६ बैशाख ११) को राशीफल -
तपाईको (बिहिबार २०७६ बैशाख ११) को राशीफल
२०७७, ११ बैशाख बिहीबार ००:१३ April 23, 2020 clickonLeaveaComment on तपाईको (बिहिबार २०७६ बैशाख ११) को राशीफल
तपाईंको ऊर्जा स्तर उच्च हुनेछ र रोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईंले केही प्रेम बाँडेमा, तपाईंकी प्रियतमा आज तपाईंको लागि एउटा दूतको रूपमा परिणत हुनेछिन्। नयाँ प्रस्तावहरू लोभ्याउने हुनेछन् तर यसका लागि कुनै पनि हतार निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने छैन। हालमा साँच्चै नै तपाईंको जीवन कठिन भएको छ, तर आज तपाईंले आफ्नो जोडीको प्रमोदवनमा आफैलाई पाउनुहुनेछ।
आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। आफ्नो क्यारियरको योजनामा भन्दा बाहिरी गतिविधिहरुमा धेरै समय नष्ट गरेर बच्चाहरुले केही निराश बनाउँछन्। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। तपाईंको जोडीले छिमेकीमा सुनेको कुरालाई लिएर मुद्दा बनाउन सक्छन्।
तनाउबाट छुटकारा प्राप्त गर्न आफ्ना बच्चाहरुसँग आफ्नो बहुमूल्य समय बिताउनुहोस्। तपाईंले बच्चाको निको पार्ने शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। तिनीहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली आध्यात्मिक र भावनात्मक व्यक्तित्व हुन्। तपाईंले आफैलाई पुन यौवन भएको महसुस गर्नु हुनेछ। घर वा सामाजिक भेलामा भएको मरम्मतको काममा तपाईं व्यस्त हुने सम्भावना छ। तपाईंले आज अन्धो प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव भएको पाउनुहुनेछ। तपाईं आफ्नो योजना बारे खुल्ला हुनुहुन्छ भने आफ्नो परियोजना नष्ट गर्नुहुनेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
तपाईंले महसुस गर्ने तरीकामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। व्यक्तिगत समस्या समाधान गराउन चाहने एक वृद्ध आफन्तबाट आशिष पाउनुहुनेछ। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। काममा तपाईंका प्रतिद्वन्द्वीले आज आफ्ना नराम्रा कृत्यको परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। तपाईंको पुरानो साथी आउनेछ र आफ्नो जोडीसँग तपाईंले बिताएका पुराना सुन्दर सम्झनाहरुको सम्झना गराउन सक्छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरूले असुविधा गराउन सक्छन्। योग्यहरूका लागि वैवाहिक साँठगाँठ हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो योजनामा आफ्ना साझेदारहरूलाई पत्यार गराउँदा समस्या पर्नेछ। कसैलाई भेट्ने आफ्नो योजना आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले गर्दा बिग्रियो भने, तपाईंले सँगै समय बिताउने अर्को राम्रो समय पाउनु हुनेछ।
तपाईंको साँझले तपाईंलाई तनाउयुक्त राख्न सक्ने मिश्रित भावना दिनेछ। धेरै चिन्ता गर्ने तर कुनै आवश्यकता छैन – किनकि खुशीले तपाईंलाई निराशाले भन्दा बढी आनन्द दिनेछ। तपाईंका मित्रहरूले तपाईं तिनीहरूलाई धेरै आवश्यकता परेको समयमा तपाईंलाई तल पार्न सक्छन्। आज साँझ जिस्क्याउने कार्यमा नलाग्नुहोस्। आज अनुकूल दिन हो; काम गर्दा यसको उचित उपयोग गर्नुहोस्। वैवाहिक जीवनले केही नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ; तपाईंले आज यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
केही तनाउ र सोचमा भिन्नताले तपाईंलाई रिसाले र दुखी बनाउन सक्छ। आज यदि तपाईंले चिनेका मान्छेमा कुनै पनि निर्णय थोप्ने प्रयास गर्नुभयो भने – तपाईंले आफ्नै चासोको मर्माहत हुने मात्र अन्त गर्नुहुनेछ – धैर्यपूर्ण तरीकाले स्थितिलाई स्याहार्नु नै अनुकूल परिणाम पाउने तरिका हो। तपाईं आज आफ्नो वरिपरि सबैतिर आफ्नी प्रियतमाको प्रेम महसुस गर्नुहुनेछ। यो एउटा सुन्दर प्यारो दिन हो। रचनात्मक प्रकृतिकका कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
आफुलाई शान्त राख्न मद्दत गर्ने गतिविधिहरुमा आफैलाई संलग्न गर्नुहोस्। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। तपाईंले धेरै पहिले सुरू गर्नुभएको तपाईं एउटा परियोजना पूरा गर्दा तपाईंलाई आज धेरै सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। तपाईँले कति सुन्दर काम गर्नुभएको छ भन्ने देखाउन आज तपाईंको प्रेम फूल्नेछ। तपाईंको कामको पर्यावरण आज राम्रो कार्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
तपाईंले आफ्नो डर निको पार्ने यो उचित समय हो। तपाईंले यसलाई मात्र शारीरिक जाँगर घटाउने कारण हो भनेर नलिनुहोस्, जीवन घटाउने पनि हो भनेर मान्नुहोस्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। काममा मान्छेसँग काम गर्दा बुद्धि, धैर्य र सावधानी अपनाउनुहोस्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। वैवाहिक जीवनको एउटा कठिन चरण पछि, तपाईंले आज रमाइलो दिन पाउनु हुनेछ।
तपाईंले आफ्नो तनाउ हटाउन सक्नुहुन्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! योजना बनाउन मात्रैमा आफ्नो बहुमूल्य समय बर्बाद नगर्नुहोस् – तर हिंड्नुहोस् र यी योजनाहरू लागू गर्न सुरु गर्नुहोस्। आजभोली तपाईं र तपाईंको जोडी धेरै खुसी हुनु हुँदैन भने, तपाईं आज पागल रमाइलो गर्न जानु हुँदैछ।
बेलायतमा कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट मृत्‍यु हुनेको सन्ख्या १८,१०० पुग्यो, दिनहु बढी रहेको अवस्था
ब्याजमा छुट दिइने
तपाईं को आजको राशीफल (बिहीवार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस्
२०७५, ३१ जेष्ठ बिहीबार ००:४० June 14, 2018 clickon
तपाईको (आईतबार २०७६ चैत्र १६) को राशीफल
२०७६, १६ चैत्र आईतवार ०१:०२ March 29, 2020 clickon
तपाईको (शनिबार साउन ३१) को राशीफल
२०७७, ३१ श्रावण शनिबार ०३:२२ August 15, 2020 clickon